Misoro yenhau, China, Kubvumbi 28, 2022
Mashoko emutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters VaJulius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa pachigaro okonzera mutaura wakanyanya. Vamwe vari kuvatsigira asi vamwe vachivashora.
Musika weZITF woenderera mberi kuBulawayo mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga vavhura zviri pamutemo musangano weConnect Africa Symposium wapindwa nevesangano reComesa, United Nations neSADC.
Zimbabwe National Statistics Agency inoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi matanhatu nemasere zvine zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 68 178 kuti irarame.
Mutungamiri wenyika yeUkraine VaVolodymyr Zelenskyy nhasi vaita musangano nemunyori mukuru weUnited Nations VaAntonio Guterres muKyiv nhasi mukutsvaga nzira dzekumisa hondo yekurwiswa nenyika iyi neRussia.
Muchirongwa chedu cheWomens Round Table na8pm nhasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nezvizvara zveZimbabwe zviri muSouth Africa.